कास्कीः स्कुटर दुर्घटना हुँदा १ जना घाईते - gandaki.nepalpolice.gov.np
कास्कीः स्कुटर दुर्घटना हुँदा १ जना घाईते
जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.९ न्युरोड स्थितमा ग. १८ प १७५ नं. को स्कुटर आफैँ अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा स्कुटरको पछाडि सवार जि.कास्की पोखरा म.न.पा.९ प्रगती टोल बस्ने वर्ष ३६ को सरोज बि.क. घाईते भई GMC अस्पतालमा उपचार भईरहेको । स्कुटर चालक उपचारमा संलग्न रहेको । स्कुटर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको ।